Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Ee Laga Qoray Maanta, Romelu Lukaku, Tammy Abraham, Houssem Aouar, Jadon Sancho, Gareth Bale, Fernando Hierro, Iyo Glen Kamara
HomeWararka Ciyaaraha MaantaWararka Suuqa kala iibsiga: ee Laga Qoray Maanta, Romelu Lukaku, Tammy Abraham, Houssem Aouar, Jadon Sancho, Gareth Bale, Fernando Hierro, iyo Glen Kamara
May 4, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 4 May
Borussia Monchengladbach ayay u badan tahay inay waayi doonaan Marcus Thuram iyo Denis Zakaria xagaagaan, sida ay qortay jariirada Bild
Mustaqbalka Gareth ee Bale waxaa go’aamin doona Tababare kasta oo qabta Shaqada Kooxda sida ay qortay Daily Mail .
Glen Kamara ayaa xiiseynaya Arsenal, sida ay qortay Football Insider , iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Rangers uu diyaar u yahay arintaasi.
In kasta oo mudaaharaadyadii taageerayaasha Manchester United ee dhammaadkii usbuucan ee horseeday in dib loo dhigo ciyaarta , haddana ma jiro wax qorshe ah oo qoyska Glazer ay ku iibinayaan kooxda, sida uu qoray wargayska Guardian.
Qeybta Hore Suuqa kala iibsiga 4 May
Romelu Lukaku ayaa sheegay inuu rajeynayo inuu sii joogo Inter ka dib markii uu ku guuleystay Serie A, waxaana uu ku tilmaamay xilli ciyaareedka 2020-21 xilli ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa xirfadiisa ilaa iyo haatan. Sky Italia:
Fernando Hierro ayaa ku booriyay Real Madrid inay ka shaqeyso heshiis cusub Sergio Ramos, kaasoo uu aaminsan yahay inuu u qalmo fursad uu ku soo gabagabeeyo xirfadiisa caasimada Spain. Goal
Tottenham ayaa qarka u saaran inay dalab xagaaga ah u dirto daafaca midig ee kooxda Norwich Max Aarons – sida laga soo xigtay Football Insider .
Borussia Dortmund ayaa, sida laga soo xigtay ESPN, hoos u dhigtay qiimaha ay ku dooneysay Jadon Sancho oo ay gaarsiisay (£ 87m / $ 120m). ESPN,
Aston Villa ayaa hogaamineysa loolanka loogu jiro weeraryahanka Chelsea Tammy Abraham, sida uu sheegayo Football Insider.
Liverpool ayaa, ka caga jiideysa inay bixiso qiimaha lagu doonayo weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Haaland. Football Insider
Nathan Ake ayaa durbaba ka fikiraya mustaqbalkiisa ka dib hal xilli ciyaareed oo uu ku qaatay Manchester City, sida uu sheegayo Voetbal International.
Bayern Munich ayaa ugu cadcad saxiixa Carney Chukwuemeka oo ka socda Aston Villa, sida laga soo xigtay Football Insider .
Juventus ayaa sameyn doonta isku day cusub oo ay kula soo saxiixaneyso Houssem Aouar xagaagan kooxda Lyon. Kooxda Serie A ka dhisan ayaa isku dayday inay soo iibsato ciyaaryahanka khadka dhexe sannadkii hore, Calciomercato